Voka-pifidianana: niarahaba ny filoha Rajoelina ny iraisam-pirenena | NewsMada
Voka-pifidianana: niarahaba ny filoha Rajoelina ny iraisam-pirenena
Manao ranolava. Nisesy ny fanambarana fiarahabana sy firariantsoa avy amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena amin’izao nahavoafidy ho filoham-pirenena an-dRajoelina Andry izao. Anisan’izany ny eo anivon’ny Firenena mikambana ( ONU), ny Vondrona eoropeanina (UE), ny Vondrona afrikanina (UA), ny avy amin’ny Sadc. Eo koa ireo firenen-dehibe toa an’i Etazonia, Frantsa, Sina, Japon, Grande Bretagne… “Miarahaba noho ny fahavitan’ny fifidianana tao anatin’ny filaminana sy ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fanatontosana izany izahay. Mendrika sy manan-tantara izany… Eo anilan’i Madagasikara hatrany ny ONU ary mba hihamafy orina anie ny demokrasia sy ny fanajana ny zon’olombelona ary koa ny hizorana amin’ny fampandrosoana maharitra”, hoy ny sekretera jeneralin’ny ONU, i António Guterres. Tahaka izany koa ny avy amin’ny UA, amin’ ny alalan’ny filohan’ny kaomisiona, i Moussa Faki Mahamar. “Aoka hatao laharam-pahamehana ny fampihavanam-pirenena sy ny tombontsoa ambonin’ny firenena ary ny fanamafisana orina ny demokrasia”, hoy ny fanambarana.
Hitandro hatrany ny firaisam-pirenena…
Nanaovan’ny UA antso avo koa ireo mpanao politika mba hankato ny voka-pifidianana sy hanaja ny soatoavina demokratika niainga amin’ ny safidim-bahoaka. “Aoka tsy ho any amin’ny herisetra fa hitandro hatrany ny firaisam-pirenena”, hoy ihany ny fanambarana. Ankoatra ireo, teo koa ny fiarahaban’ny Andriamanjaka Maraokanina, i Mohamed IV ny filoha Rajoelina amin’izao hitantanany ny firenena izao. Notsiahiviny tamin’izany ny fitsidihany sy ny nahatongavany teto amintsika, ny volana novambra taona 2016. “Firenena manana ny maha izy azy i Madagasikara. Manana fifandraisana eo amin’ny tantara amin’i Maraoka fony faha-mpanjaka ary mbola ao anatin’ny firahalahiana tanteraka hatramin’izao ny roa tonta”, hoy izy tamin’ny fanambarana.
Ankoatra ireo, nirary soa ho an’ny filoha Rajoelina ny minisitry ny Raharaham-bahiny, i Dovo Eloi Maxime sy ny mpiara-miasa aminy rehetra. Naneho ny fahavononany hiara-kiasa aminy ho fanohizana ny asa fampandrosoana ny firenena ny eo anivon’ity minisitera ity.